Falanqeynteyda: Google Analytics ee iPhone | Martech Zone
Arbaco, Juun 10, 2013 Douglas Karr
KISSmetrics waxay sii daayeen codsi cusub oo BILAASH ah oo iPhone ah oo la yiraahdo Falanqeynteyda. Waa habka ugu dhakhsaha badan ee loo arko sida cabbiradaada Google Analytics ay sameynayaan marka aad ka maqnaato miiskaaga.
Horaantii sanadkan, dadka ku jira KISSmetrics waxay raadinayeen barnaamij wanaagsan oo Google Analytics ah si ay uga caawiso inay ku sii hayaan tabkooda xogtooda. Midna way heli kari waayeen. Ama barnaamijyada moobiilku waxay ahaayeen WAY aad u aasaasi ah oo aan kuu oggolaan doonin inaad wax isbarbardhig ah sameyso, ama waxay isku dayeen inay sameeyaan WAY aad u badan mana ahayn wax fudud oo la isticmaalo.
Falanqeynteyda waxay muujineysaa xogtaada Google Analytics markaad socoto, kulan, ama aad ubaahantahay cusbooneysiin deg deg ah.
Iyadoo Falanqeynteyda, waxaad isbarbar dhigi kartaa xogta maanta iyo shalay, maalin isku mid ah usbuucii hore, iyo maanta oo kale labo todobaad kahor. Waxa kale oo aad isbarbar dhigi kartaa xogtii shalay iyo asbuucyadii hore ama todobaadkan xogta toddobaadyadii hore.
Falanqeynteyda wuxuu ku siinayaa xogta aad u baahan tahay isla markaaba. Waxaad si dhakhso leh ugu heli doontaa booqashooyinkaaga, booqdayaasha gaarka ah, aragtida bogga, Yoolalka, Macaamil ganacsi iyo Dakhliga Ganacsiga.
Tags: Dakhliga EcommerceMacaamilada EcommercegoolAnalytics googlegoogle falanqaynta moobilkamacruufkaiphonearagtida boggaBooqashooyinka Gaarka ahBooqashada
6 Calaamadood Waa Waqtigii Laqaadi Lahaa Barnaamijka Falanqayntaada
Shirkadda Software-ka Malaysia
Sep 20, 2013 at 3: 08 AM
Wow, waxaan u maleynayaa inuu kani yahay barnaamij quruxsan kuwa u baahan cusbooneysiin deg deg ah.